Nagarik News - ट्वीटरमा १० हजार अक्षर लेख्न पाइने!
ट्वीटरमा १० हजार अक्षर लेख्न पाइने!
17 Jan 2016 | 16:27pm
आइतबार ३ माघ, २०७२
ट्वीटरले १ सय ४० अक्षरको सीमालाई बढाएर १० हजार पुर्याउने तयारी गरेको छ। आगामी मार्च महिनासम्ममा यस्तो सुविधा थप्ने तयारी ट्वीटरको छ। परीक्षणको रूपमा ट्वीटरले १० हजारभन्दा तलमाथि पारेर नयाँ फिचर लन्च गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
ट्वीटरका सहसंस्थापक तथा सीईओ ज्याक डोर्सीले प्रयोगकर्ताहरू १ सय ४० अक्षरको सीमाका कारण ट्वीट लेख्नुको साटो कुनै पनि सामग्रीको स्क्रिनसट खिचेर ट्वीट गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
डोर्सी सीईओमा नियुक्त भएसँगै नयाँ–नयाँ फिचर ल्याउँदै आएका छन्। पछिल्लोपटक ट्वीटरले मोमेन्ट्स फिचर सुरु गरेको थियो । पोल फिचर थप गर्नुका साथै बाइ बटन पनि थप गरेको छ । त्यस्तै ताराको आकृतिवाला एभोराइट बटनलाई हटाएर मुटुको आकृतिवाला लाइक बटन राखेको छ ।